Clinton oo bilowday ololihii tartanka madaxtinimada USA - BBC News Somali
Clinton oo bilowday ololihii tartanka madaxtinimada USA
Xoghayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka, Hilary Clinton, ayaa jeedisay khudbaddii ugu horreysay ee ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Khudbadan ayaa waxa ay ka jeedisay isu soo bax ballaaran oo kumanaan taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ay ku qabsadeen magaalada New York.
Iyadoo ka hadlaysay fagaaraha Roosevelt Island, ayaa Mrs Clinton waxa ay khudbadeeda diiradda ku saartay dhaqaalaha hasayeeshee waxa ay hoosta ka xariiqday khibradda ay u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda.
Mrs Clinton ayaa sheegtay in la dhisi doono hodantinimo rasmi ah oo misana ay dadka oo dhan wadaagi doonaan, mana ahaan doonto bay tiri mid ku kooban madaxda shirkadaha iyo dadka maareeya dhaqaalaha gaarka loo leeyahay.
Waxa ay weerartay xisbiga ay ishayaan ee Jamhuuriga, iyadoo sheegtay in ay ka soo horjeesteen bulshada inteeda badan.
Waxay sidoo kale ka hadashay dib u habeyn lagu sameeyo dimuqraadiyadda Mareykanka, iyadoo sheegtay in joojin doonto lacagta qarsoodiga ah ee ka soo baxaysa shirkadaha waa weyn ee la galinayo siyaasada.